မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို.နယ် ဦးစံညွန်.လမ်း တွင် ကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
MBR-1 , BR- 1 , ပါကေး , ကြွေပြာခင်း , ဘိုထိုင်အိမ်သာ ,wH , lift , လမ်းသန်. မိသာစု နေထိုင်ရန် နှင့် သွာလာရ လွယ်ကူသော နေရာဖြစ်ပါသည်…...
MBR-1 , BR- 1 , ပါကေး , ကြွေပြာခင်း , ဘိုထိုင်အိမ်သာ ,wH , lift , လမ်းသန်. မိသာစု နေထိုင်ရန် နှင့် သွာလာရ လွယ်ကူသော နေရာဖြစ်ပါသည်…
Property ID: S-1205799
ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ကွန်ဒို -No 5၊ အခန်း နံပါတ်-2506 ၊25လွှာ၊ ဟံင်္သာဝတီလမ်းနှင့်…
1 sqft - 340,000...
1 sqft - 340,000
Eaint Chue Thwal
Advertiser : Eaint Chue Thwal
Property ID: S-1204547
Office no : 09 252303544
ရောင်းရန် - မဟာစွေ condo ဈေးအရမ်းတန်
Listed 13 August 2019
Property ID: S-1202604
*Location – Star City Condo , Thanlyin Town ship. *Price – *Property Type — Condo (Lift) *Area — 946 sqft *Rooms formation —1-Master bedroom , 1-Bedroom , 3-Aircon Living room and Kitchen. *Other Features — ceramic , 2-Bathrooms and ready to live located at Thanlyin Town ship....
*Location – Star City Condo , Thanlyin Town ship. *Price – *Property Type — Condo (Lift) *Area — 946 sqft *Rooms formation —1-Master bedroom , 1-Bedroom , 3-Aircon Living room and Kitchen. *Other Features — ceramic , 2-Bathrooms and ready to live located at Thanlyin Town ship.
Property ID: S-1203793
အပေါ်ထပ်မှ ရှုခင်းများ ကြည့်ရှု၍ ကောင်းခြင်း၊ လေကောင်းလေသန့်ရခြင်း စသည့်ကောင်းခြင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အငှားဈေး…...
အပေါ်ထပ်မှ ရှုခင်းများ ကြည့်ရှု၍ ကောင်းခြင်း၊ လေကောင်းလေသန့်ရခြင်း စသည့်ကောင်းခြင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အငှားဈေး…
Tin Zaw Htun
Advertiser : Tin Zaw Htun
ရောင်းရန် - ရွှေမိုးကောင်း condoအမြန်ရောင်းမည်
Property ID: S-1200259
Advertiser : Su Hlaing
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်ကွန်ဒိုများ ရောင်းရန် Real Estateရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
condo, for sale in all townships,